वित्तीय आवश्यकताहरूको श्रेणीक्रम: एक परिचय
José Quiñonez मा डिसेम्बर 7, 2015 द्वारा लिखित।
वित्तीय आवश्यकताहरूको एमएएफको हाइरार्चीले प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक कल्याणको मूल्यांकनको लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्दछ।
मेहनती परिवारहरूको लागि एक उचित वित्तीय बजार निर्माण गर्न हाम्रो मिशन मा आठ बर्ष, हामी MAF मा थाहा छ Lending Circles सहभागीहरूलाई सशक्तीकरण गर्दैछ क्रेडिट निर्माण गर्न, reduceण कम गर्न, र बचत वृद्धि गर्न। तर ती लाभहरू कसरी ठूलो वित्तीय सुरक्षामा अनुवाद हुन्छ? के उनीहरूले हाम्रो ग्राहकहरूको ठूलो वित्तीय जीवनमा अर्थपूर्ण सुधार ल्याउँदछन्?
जस्तो Lending Circles वर्षौंको अवधिमा फस्टा र विस्तार भएको छ, हामीले डाटालाई एमास गर्दैछौं जसले ग्राहकको समग्र आर्थिक स्थिरता र गतिशीलतामा कार्यक्रमको प्रभावलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ। तर जब हामीले यी प्रश्नहरूको बारेमा गहिरो रूपमा डुब्न थाल्छौं, तब हामीले महसुस गर्‍यौं कि हामीसँग वित्तीय सुरक्षाको स्पष्ट परिभाषा छैन र विस्तार गरेर यसलाई नाप्ने भरपर्दो तरीका पनि छ।
वित्तीय स्वास्थ्यको एउटा अपूर्ण तस्वीर
सामान्यतया, आय वा क्रेडिट स्कोर एक व्यक्तिको आर्थिक कल्याणको लागि प्रोक्सीको रूपमा देखिन्छ। तर यी साधारण मेट्रिक्स एक व्यक्तिको पूर्ण वित्तीय जीवनको आकलन गर्न पर्याप्त छैन। कसैको आम्दानी थाहा पाएर उनको खर्च, debtsण वा नेटवर्थको बारेमा धेरै कुरा गर्दैन - विशेष गरी त्यस्तो अवस्थामा जहाँ आय अस्थिर हुन्छ, दिन प्रति दिन वा हप्ता हप्ताको बीचमा अनिश्चित हुन्छ। र जबकि क्रेडिट स्कोर को भविष्यवाणी सम्भावना कि एक rण लिने aण चुक्ता गर्नेछन्, तिनीहरूले हामीलाई aण दिनेको सत्यको बारेमा थोरै बताउँदछन् क्षमता चुक्ता गर्न
यसले orण लिनेलाई त्यो backण फिर्ता लिनको लागि के लिन्छ? उसलाई पहिलो payण तिर्न दोस्रो needण चाहिन्छ? यदि हो भने, के हामी ईमानदारीसाथ भन्न सक्छौं कि त्यो सुरुको repण चुक्ता गर्न सक्षम छ? र असंख्य अनौपचारिक वित्तीय लेनदेनको बारेमा के हमारे ग्राहकहरु आफ्नो वित्तीय दायित्वहरु को लागी भर पर्छ? एक व्यक्तिको वित्तीय सुरक्षा आकलन गर्दा ती कहाँ फिट हुन्छन्?
वित्तीय आवश्यकताहरूको MAF को हाइरार्की
जवाफहरूको लागि हामी अब्राहम मास्लो, सम्मानित अमेरिकी मनोविज्ञानीतर्फ लाग्यौं जसले "हाइरार्की अफ नीड्स" विकसित गरे, जुन एक शारीरिक, सामाजिक, र मनोवैज्ञानिक आवश्यकताहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ जुन व्यक्तिलाई उनको वास्तविक क्षमताको महसुस गर्न सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। उसकोमा १ 194 33 देखि अन्तिम काम, मास्लोले मानव स्तरलाई पाँच तहमा व्यवस्थित गर्‍यो, सब भन्दा आधारभूत (स्वास्थ्य र कल्याणकारी) बाट सब भन्दा जटिल (आत्म-वास्तविकता) मा क्रमबद्ध गरियो, प्रत्येक तहको पछिल्लो, उच्च-अर्डर आवश्यकताको सन्तुष्टिको लागि। उस्तै तर्कको प्रयोग गरेर, एमएएफले "वित्तीय आवश्यकताहरूको हाइरार्ची" (HFN) विकसित ग individuals्यो जुन व्यक्तिले उनीहरूको वास्तविक आर्थिक क्षमतालाई महसुस गर्न आवश्यक छ भनेर वर्णन गर्न।
HFN शारीरिक आवश्यकताहरू (आय), सुरक्षा (बीमा), प्रेम र सम्बन्धित (क्रेडिट), सम्मान (बचत), र आत्म-वास्तविकता (लगानी) को लागि वित्तीय समानताहरू पहिचान गर्दछ:
INCOME: सबै भन्दा आधारभूत वित्तीय आवश्यकता आधारभूत जीवन खर्च कवर गर्न आय हो, जस्तै खाना, आवास र उपयोगिताहरू। आम्दानीले धेरै प्रकारका लिन सक्दछ, मजदूरी र लाभांशबाट सरकारी लाभ वा परिवार वा साथीहरूबाट स्थानान्तरण। आय वित्तीय सुरक्षाको आधार हो।
बीमा: आयलाई बचाउन, व्यक्तिले अप्रत्याशित घटनाहरूको बिमा गर्नु पर्दछ जसले अवरोधहरू सिर्जना गर्दछ। यसको लागि सम्पत्तिहरू जम्मा गर्नु पर्दछ, नगद, सम्पत्ति, र स्वास्थ्य सहित, र नोक्सान, चोरी, क्षति, र बिमारीको बिरूद्ध सुरक्षित।
क्रेडिट: कार, घर, वा शिक्षा जस्ता सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न अन्यथा एक्लै आय मार्फत प्राप्त गर्न योग्य हुँदैन, मानिसहरूलाई क्रेडिट आवश्यक छ। यो व्यक्ति पहुँच गर्न क्रेडिट इतिहास र क्रेडिट स्कोर हुन आवश्यक छ, र लाभ, कम लागत पूंजी।
बचत गर्दै: जब व्यक्ति बचत गर्दछ, तिनीहरूले विशिष्ट लक्ष्यहरूको लागि स्रोतहरू टाढा राख्छन्। बचत गर्ने क्षमताले अनुशासन प्रदर्शन गर्दछ र आत्मविश्वास, उपलब्धीको भावना, र आफैलाई र अरूलाई सम्मान दिनुहुन्छ।
निवेश: HFN को शिखर तब हुन्छ जब मानिसहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताको गतिशीलता महसुस गर्छन्। यो त्यस्तो अवस्था हो जहाँ व्यक्तिले जोखिम बोक्ने उद्यममा लगानी गर्न सक्दछन साथै फिर्ताको सम्भाव्यता पनि छ। यसले एउटा निर्णायक मोड प्रतिनिधित्व गर्दछ किनकि मानिससँग आय आर्जन गर्न लगानी छ, पूर्ण रूपमा कमाएको ज्यालामा भर पर्नु भन्दा। लगानी को माध्यम बाट, व्यक्तिहरु लाई महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न को लागी अवसर छ जस्तै आफ्नो परिवार को लागी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त गर्न, सेवानिवृत्ति, र बुढो उमेर मा मर्यादा।
वित्तीय आवश्यकताहरूको हाइरार्ची एक क्रान्तिकारी अझै सरल मोडल हो जसले मानिसहरूलाई उनीहरूको वास्तविक आर्थिक क्षमता महसुस गर्न के गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता प्रदान गर्दछ। धेरै अमेरिकीहरूको लागि, वित्तीय सुरक्षा कामबाट सुरु हुन्छ। व्यक्तिलाई खर्चको लागि भुक्तानी गर्न र आफ्नो बजेटमा सन्तुलन राख्न आय चाहिन्छ। उनीहरूले आघात बिमा गर्न पनि आवश्यक छ; तिनीहरूले सम्पत्तिहरू अधिग्रहण गर्नको लागि क्रेडिट उपयोग गर्न आवश्यक छ; तिनीहरूले वर्षाको लागि बचत गर्नु आवश्यक छ; र तिनीहरूले भविष्यका फिर्ताको लागि लगानी गर्न आवश्यक छ। जे होस् प्रत्येक व्यक्तिले परिस्थितिको एक अद्वितीय सेट र यी आवश्यकताहरू प्रबन्ध गर्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दछ, मोडेल सबै आय र जनसांख्यिकीय समूहहरूमा लागू हुन्छ। मस्कोको मोडेल सबै व्यक्तिहरूमा लागू हुन्छ त्यसरी नै, हामी विश्वास गर्छौं एचफिएन सबैको लागि लागू हुन्छ, व्यक्तिको वित्तीय जीवनको स्पष्ट 360 360०-डिग्री दृश्य प्रदान गर्दछ।
अगाडि बढ्नका लागि नयाँ फ्रेमवर्क
तथ्यको बावजुद In अमेरिकीहरू मध्ये १ आर्थिक तवरले बेसी छ, एक व्यक्तिको आर्थिक आवश्यकता बुझ्नको लागि एक विस्तृत रूपरेखा अझै बाँकी छ। वित्तीय आवश्यकताहरूको एमएएफको हाइरार्चीले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा खाली ठाउँ भर्छ, हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिको वित्तीय कल्याणको मूल्यांकनको माध्यम दिन्छ। उपभोक्ताहरू - विशेष गरी कम आय भएका उपभोक्ताहरूसँग जटिल वित्तीय जीवन, प्राय: मिक्सिंग र विभिन्न वित्तीय उत्पादनहरू, अनौपचारिक अभ्यासहरू, र सरकारी कार्यक्रमहरू मिलान उनीहरूको आर्थिक सुरक्षाको अद्वितीय संस्करण प्राप्त गर्न। तिनीहरूको वित्तीय कल्याणको बारेमा हाम्रो समग्र दृष्टिकोणले हामीलाई तिनीहरूको स्तर र उनीहरूको चुनौतीहरूको पहिचान गर्न सक्षम गर्दछ। यस बृहत दृष्टिकोणले गैर नाफामुखी क्षेत्र, वित्तीय सेवा उद्योग, र नीति निर्माताहरूलाई अझ बढी सार्थक र प्रभावकारी समाधान प्रदान गर्न जनताको आर्थिक कल्याण सुधार गर्न सक्दछ।
वित्त, लगानी र LAYMAN। - आर्थिक विपक्ष
अप्रील 6, 2019 मा 8:18 बिहान
[…] उही बेकार, Mission Asset Fund यसको साइट मा एक लेख मा मानिस को वित्तीय आवश्यकताहरु को क्रम मा एक पदानुक्रम सिर्जना। यसले मेरो […] समात्यो